राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री, शपथका लागि तयार भएर बस्न निर्देशन, | रेडियो झापा 100.7 MHz.
राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री, शपथका लागि तयार भएर बस्न निर्देशन,
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ १७:३०:२७
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षले आज सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । जसपा स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा जान लागेको हो । महतो उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री हुने जनाइएको छ । अहिले साँझ शपथ हुँदैछ ।
हिजो राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर अध्यक्ष ठाकुरले सरकारमा जाने विषय लगभग टुङ्ग्याएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहका सूर्य थापाले सहमति भएमा जसपा सरकारमा सहभागी हुने कुरा स्वाभाविक रहेका बताउनुभएको छ ।